प्रकाश को उदय: यो किन माथि जान्छ, कसले यो असर गर्छ र पैसा बचाउन को लागी सुझाव | अर्थतन्त्र वित्त
एनकर्नी आर्कोया | 07/09/2021 16:08 | ऊर्जा
La हल्का उदय यो एक समस्या हो कि हामीलाई जागा राखी रहेको छ। अधिक र अधिक स्पेनीहरु लाई आफ्नो साना र मध्यम व्यवसायहरु लाई बन्द गर्नु पर्छ किनकि उनीहरु खर्च वहन गर्न सक्दैनन्। तर परिवारहरु को मामला मा, बृद्धि संग व्यवहार जबकि वेतन निश्चित रहन्छ (र यदि तपाइँ एक वेतन र एक नौकरी छ) एक ओडिसी जस्तै लाग्छ।
तर बत्ती किन बलेको छ? के यसले हामी सबैलाई समान रूपले असर गर्छ? के हुन्छ यदि यो चढाई रोक्दैन? त्यहाँ बचाउने तरिकाहरु छन्? यदि तपाइँ प्रकाश को उदय को सबै समस्याहरु लाई बुझ्न को लागी आवश्यक छ, तल हामी तपाइँलाई आवश्यक जानकारी दिन को लागी प्रयास गर्नुहोस्।
1 बत्ती किन माथि जान्छ?
2 स्पेनमा बिजुली सबैभन्दा बढी खर्च हुन्छ?
3 जो प्रकाश को उदय बाट प्रभावित छ
4 कसरी प्रकाश को उदय संग बचत गर्न को लागी
4.1 प्रकाश को उदय भन्दा पहिले जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस्
4.2 एलईडी बत्ती को लागी बल्ब परिवर्तन गर्नुहोस्
4.3 प्राकृतिक प्रकाशको अधिकतम बनाउनुहोस्
4.4 बिजुली दर र तपाइँको कम्पनी जाँच गर्नुहोस्
4.5 उपकरणहरु लाई स्ट्यान्ड बाई मा नछोड्नुहोस्
बत्ती किन माथि जान्छ?
एउटा प्रश्न हो कि धेरै मानिसहरु लाई प्रकाश को उदय संग टाउको मा आफ्नो हात फ्याँकिन्छ किन यो हुन्छ। यो ध्यानमा राख्नु पर्छ कि बिजुली ऊर्जा संसार मा मुख्य स्रोत हो, र कि नवीकरणीय ऊर्जा को लागी छनौट नगरी यसको टोल लिइरहेको छ, विशेष गरी जब बाट उनीहरु पर्याप्त स्थापित वा विकसित गरीरहेका छैनन् पूरा संसारलाई आपूर्ति गर्न सक्षम छैनन्।
तर यो बृद्धि को मुख्य कारणहरु मध्ये एक हो कि धेरै भन्दा धेरै मानिसहरु डुबिरहेको छ प्राकृतिक ग्याँस पुनर्मूल्यांकन जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादन भैसकेको छ। तपाइँ एक विचार दिन को लागी, TFF मा, जो मुख्य यूरोपीय प्राकृतिक ग्यास बजार हो, यो मई मा 25 यूरो / MWh को एक मूल्य दर्ता। यो धेरै जस्तो लाग्दैन, तर यदि हामी तपाइँलाई बताउँछौं कि यो मूल्य गत बर्ष को तुलना मा ४००% को वृद्धि को प्रतिनिधित्व गर्दछ, चीजहरु परिवर्तन।
तर यो मात्र कारण हो कि प्रकाश उछाल र सीमाहरु मा जाँदै छ। अर्को "अपराधी" CO2 हो। किनभने CO2 उत्सर्जन को लागी तिर्नु पर्ने मूल्यहरु बढेको छ (हामी छ महिना मा १००% को बृद्धि को बारे मा कुरा गरीरहेका छौं), बिजुली को लागत अझै बढेको छ। आंकडा राख्ने हो भने, यदि पहिले 100-25 यूरो तिरेको थियो, अब 30-50 यूरो भुक्तान गरीन्छ। र सबै भन्दा नराम्रो, यो अझै उच्च जाने आशा गरिन्छ।
La प्रत्येक प्रयोगकर्ता बाट उच्च मागया त गर्मी मा वातानुकूलन संग, वा जाडो मा हीटिंग संग, यो पनि मूल्य बढाउँछ। र यो हो कि उर्जा एक विशेषाधिकार प्राप्त सम्पत्ति बनिरहेको छ कि केवल केहि मात्र यो जस्तै जारी राख्न तिर्न सक्षम हुनेछन्। यस कारण को लागी, त्यहाँ यसको लागी एक उच्च मांग छ, कम्पनीहरु आफैं मूल्य अधिक महंगा बनाउँछन्, जसको कारण यो अझ महँगो भुक्तान गरीन्छ।
स्पेनमा बिजुली सबैभन्दा बढी खर्च हुन्छ?
जे होस् यो जानकारी बिजुली बिल को बोझ कम गर्दैन, तपाइँ लाई थाहा छ कि स्पेन देश जहाँ बिजुली सबैभन्दा महँगो छैन। विशेष गरी, हामी पाँचौं देशको बारेमा कुरा गर्दैछौं।
युरोपेली सांख्यिकीय एजेन्सी, यूरोस्टेट को डाटा अनुसार, देश जसको ऊर्जा यूरोप मा सबैभन्दा महंगा छ जर्मनी हो। जे होस्, यो नुन को एक दाना संग लिनु पर्छ किनकी यो मापन तयार गर्न को लागी डाटा मात्र एक संदर्भ को रूप मा २०२० को दोस्रो आधा को लागी डाटा थियो, प्रकाश मा भारी बृद्धि छैन कि २०२१ मा अनुभव गरीरहेको छ र त्यो बनाउन सक्छ। केहि महिना मा परिणाम अब यो भन्दा बिल्कुल फरक हुनेछ।
जो प्रकाश को उदय बाट प्रभावित छ
नयाँ बिजुली दर १ जून २०२१ मा लागु भयो र बिस्तारै सस्तो घन्टामा बिजुली को उपभोग गर्न को लागी हाम्रो जीवनशैली लाई पुरा तरिकाले परिवर्तन गरेको छ, त्यो हो, 1 देखि 2021, 00,00 घण्टा (भ्याली सेक्शन भनिन्छ), र 08,00 बाट 08,00 सम्म। र 10,00 देखि 14,00 (फ्लैट खण्ड) सम्म; सबै मूल्य बाट बच्न जबकि 18,00 देखि 10,00 बजे र 14,00 बजे देखि 18,00 बजे सम्म प्रकाश को उपयोग। केहि गर्न को लागी धेरै गाह्रो छ।
तर के प्रकाश को उदय सबै लाई समान रूप मा असर गर्छ? सत्य यो हो कि छैन। अहिले, र बाहिर आउँदै गरेको डाटा अनुसार, यो मात्र ११ मिलियन घरहरु लाई प्रभावित गर्दछ, ती साना उपभोक्ता को लागी स्वैच्छिक मूल्य द्वारा कभर गरीएको छ (PVPC)। त्यो के हो? ठिक छ, यो प्रति घन्टा बिजुली दर हो कि सरकारले विनियमित गर्दछ।
यसको मतलब यो होइन कि बाकी स्वतन्त्र छ र यो त्यो उठाइएको छैन। चाँडै वा पछि (र धेरै पहिले तपाइँ सोच्नु भन्दा पहिले), बिजुली मा वृद्धि पनि मुक्त बजार दर संग ती व्यापारीहरु लाई प्रस्ताव र मूल्यहरु लाई प्रस्ताव गर्दछ र यी समय को साथ अधिक महँगो हुँदै जान्छ प्रभावित हुनेछ।
यद्यपि एक प्रयोगकर्ता फरक दर, चाहे स्थिर मूल्य, प्रति घंटा भेदभाव, फ्लैट दर वा निजीकृत को बीच छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, यो कम्पनीहरु हो कि मूल्य निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्य शब्दहरुमा, अन्त मा हामी सबै प्रकाश को उदय बाट प्रभावित हुनेछौं। अब को लागी मात्र लाभ यो हो कि मुक्त बजार दरहरु यति धेरै (अब को लागी) जाँदैछन जस्तो देखिन्छ।
कसरी प्रकाश को उदय संग बचत गर्न को लागी
अब जब तपाइँ अलि बढी जान्नुहुन्छ कि धेरै प्रकाश को उदय संग डूबिरहेका छन्, त्यहाँ केहि हामी गर्न सक्छौं? खैर सत्य यो हो कि हो।
प्रकाश को उदय भन्दा पहिले जीवनशैली परिवर्तन गर्नुहोस्
तपाइँ बिजुली बिल मा सकेसम्म धेरै बचाउन को लागी प्रयास गर्नु पर्छ, जो प्रयास को मतलब छ उपत्यका र सादा खण्डहरु मा सबै गर्नु पर्छ, जो सस्ता छन्।
हामी जान्दछौं कि व्यवसाय, पसल, आदि को लागी। यो केहि व्यावहारिक छैन, खास गरी जब ब्यावसायिक समय बिहान to बजे देखि २ बजे र ४ बजे देखि p बजे सम्म हुन्छ, उनीहरु के घण्टा बिजुली सबैभन्दा महँगो तिर्ने छन् त्यसलाई समातेर।
तर एक विशेष स्तर मा, तपाइँ वाशिंग मेशिनहरु, ड्रायरहरु, खाना बनाउन, आदि राख्न सप्ताहांत को उपयोग गर्न को लागी कोशिश गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो तरीकाले कि, एक दिन प्रतिदिन को आधार मा, कम खपत हुन्छ।
एलईडी बत्ती को लागी बल्ब परिवर्तन गर्नुहोस्
न केवल उनीहरु लामो समय सम्म रहनेछन्, तर पनि थोरै खपत। यस तरीकाले, एक स्विच को सक्रिय कि प्रकाश मा बदलिन्छ तपाइँ धेरै खर्च गर्नुहुन्न।
प्राकृतिक प्रकाशको अधिकतम बनाउनुहोस्
स्पेनमा प्राकृतिक प्रकाश एक सम्पत्ति हो कि हामी थोरै लाभ लिन्छौं। तेसैले यो समय परिवर्तन को लागी हो। त्यहाँ दिनको उज्यालो को धेरै घण्टा छन् जसमा तपाइँ आफ्नो घर तातो बनाउन सक्नुहुन्छ जाडो मा हीटिंग मा कम समय राख्न सक्नुहुन्छ।
र गर्मी मा? तपाइँ आफ्नो घर को बाहिर गर्मी राख्न को लागी लगानी गर्न सक्नुहुन्छ र फ्यानहरु वा वातानुकूलन चालू बिना पलायन बाट तपाइँको घर मा कूल रोक्न को लागी चाल को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
बिजुली दर र तपाइँको कम्पनी जाँच गर्नुहोस्
यदि तपाइँ याद गर्नुहुन्छ कि तपाइँ धेरै तिर्नुहुन्छ, किन तपाइँको दर र / वा कम्पनी परिवर्तन छैन? तपाइँ बिभिन्न कम्पनीहरु छनौट गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाइँ बिभिन्न दरहरु संग प्रदान गर्नुहुनेछ।
उपकरणहरु लाई स्ट्यान्ड बाई मा नछोड्नुहोस्
सबै चीज जुन तपाइँ दैनिक प्रयोग गर्नुहुन्न, वा तपाइँ मात्र कहिलेकाहीँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, भन्दा राम्रो छ तपाइँ यसलाई अनप्लग गर्नुहोस् किनकि, यो प्रयोग नगरीकन, यो ऊर्जा खपत हुनेछ र यो संकेत गर्दछ कि यो तपाइँको बीजक मा प्रतिबिम्बित हुनेछ।
त्यस्तै गरी, सँधै कुशल उपकरणहरु को लागी छनौट गर्नुहोस् कि थोरै खपत गर्दछ। हो, तिनीहरू अधिक महँगो हुन जाँदैछन्, तर यो सबैभन्दा राम्रो लगानी हो जुन तपाइँ अहिले हुन सक्नुहुन्छ।
के तपाइँ हामीलाई बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाइँ के गर्न सक्नुहुन्छ? प्रकाश को उदय को बारे मा के सोच्नुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सुरक्षित गर्दै » ऊर्जा » उज्यालो उदय
विधवा को पेंशन: आवश्यकताहरु